Franko စျေး - အွန်လိုင်း FRK ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Franko (FRK)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Franko (FRK) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Franko ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Franko တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Franko များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FrankoFRK သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.148FrankoFRK သို့ ယူရိုEUR€0.125FrankoFRK သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.113FrankoFRK သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.135FrankoFRK သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.32FrankoFRK သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.932FrankoFRK သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.27FrankoFRK သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.55FrankoFRK သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.196FrankoFRK သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.207FrankoFRK သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.28FrankoFRK သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.15FrankoFRK သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.794FrankoFRK သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹11.08FrankoFRK သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.24.96FrankoFRK သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.203FrankoFRK သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.226FrankoFRK သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿4.6FrankoFRK သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.03FrankoFRK သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥15.77FrankoFRK သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩175.52FrankoFRK သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦57.28FrankoFRK သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽10.85FrankoFRK သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.06
FrankoFRK သို့ BitcoinBTC0.00001 FrankoFRK သို့ EthereumETH0.000385 FrankoFRK သို့ LitecoinLTC0.00272 FrankoFRK သို့ DigitalCashDASH0.00163 FrankoFRK သို့ MoneroXMR0.00166 FrankoFRK သို့ NxtNXT11.53 FrankoFRK သို့ Ethereum ClassicETC0.0218 FrankoFRK သို့ DogecoinDOGE42.67 FrankoFRK သို့ ZCashZEC0.00179 FrankoFRK သို့ BitsharesBTS4.55 FrankoFRK သို့ DigiByteDGB4.73 FrankoFRK သို့ RippleXRP0.525 FrankoFRK သို့ BitcoinDarkBTCD0.0051 FrankoFRK သို့ PeerCoinPPC0.491 FrankoFRK သို့ CraigsCoinCRAIG67.37 FrankoFRK သို့ BitstakeXBS6.31 FrankoFRK သို့ PayCoinXPY2.58 FrankoFRK သို့ ProsperCoinPRC18.55 FrankoFRK သို့ YbCoinYBC0.00008 FrankoFRK သို့ DarkKushDANK47.45 FrankoFRK သို့ GiveCoinGIVE320.26 FrankoFRK သို့ KoboCoinKOBO33.69 FrankoFRK သို့ DarkTokenDT0.136 FrankoFRK သို့ CETUS CoinCETI427.07
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 11:40:03 +0000.